एउटा हातमा हकी अर्को हातमा ब्याट, के खेल्ने ? दोधारमा रणवीर - Forseenetwork : Nepalko entertainment web site : nepali cinema & Gossip : nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : nepali art ,music , manoranjan & more
एउटा हातमा हकी अर्को हातमा ब्याट, के खेल्ने ? दोधारमा रणवीर
२५ पुष,२०७३ | Agency
loading... गत बर्ष बलिउडमा तीन बायोपिक बने जुन हिट रहे । दंगल, निरजा, महेन्द्र सिंह धोनी । त्यस्तै सत्य कथामा आधारित सिनेमा एयरलिफ्ट पनि हिट भयो । यहि कारण बलिउडमा बायोपिक बन्ने क्रम बढेको छ । क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धोनीको बायोपिक सफल भएपछि अर्का क्रिकेटर युवराज सिंहको बायोपिक बन्ने तरखरमा छ । उनको बायोपिकका लागि अभिनेता रणवीर कपूरलाई प्रस्ताव गरिएको छ । युवराजको टिम ईंडियाको संघर्ष, त्यसपछि क्यान्सरबाट पीडित अनि फेरि टिममा कमब्याक । अनि बलिउडका केही अभिनेत्रीहरुसँग पनि अफेयर रह्यो । यी सबै कुराहरुलाई समेट्दा उनको बायोपिक निकै मसालेदार बन्ने छ । तर रणवीरले भने यसमा काम गर्ने या नगर्ने निर्णय लिनको लागि केहीसमय मागेका छन् ।
खास कुरा के भने रणवीर कपूरलाई अर्को बायोपिकको पनि प्रस्ताव आएको छ । हकीका जादुगर मानिने ध्यानचंदको बायोपिकमा रणवीरलाई प्रस्तुत गर्ने तयारी निर्माता करण जाहेरले गरिरहेका छन् । यसलाई करण जोहरको धर्मा प्रोडक्शनले बनाउन लागेको छ । अब निर्णय भने रणवीरको हातमा छ । उनी क्रिकेटर बन्न रुचाउँछन् या हकी प्लेयर ।
‘जग्गा जासुस’ सुपरफ्ल्प
अभिनेता रणवीर कपूर र कटरिना कैफको मुख्य भूमिका रहेको सिनेमा ‘जग्गा जासुस’ सुपरफ्ल्प भएको भारतीय सञ्चार माधययमहरुले उल्लेख गरेका छन् । ग..
आगामी प्रोजेक्टमा किन काम गर्दैनन त रणवीर-कट्रिना?
मागी विवाह ! रणवीरले खोले मुख
रणवीरका लागि बेलायतकी केटी खोज्दै आमा नितू
पाँच जनासँग प्रेम र ब्रेकअप पछि मागी विवाह गर्दै रणवीर
रणवीरले फुत्काए ९ करोडको रुपैयाँ !